ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले गरे प्रधानमन्त्री खानको आलोचना , देशमा ग्यास, पेट्रोल र बिजुलीको मूल्य बढेको जनता बेहाल - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले गरे प्रधानमन्त्री खानको आलोचना , देशमा ग्यास, पेट्रोल र बिजुलीको...
ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले गरे प्रधानमन्त्री खानको आलोचना , देशमा ग्यास, पेट्रोल र बिजुलीको मूल्य बढेको जनता बेहाल
काठमाडौं । मूल्यवृद्धिले पाकिस्तानका जनता आश्वस्त छन् । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले हिउँ चितुवाको भिडियो ट्वीट गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले उनलाई हिंस्रक ट्रोल गर्न थाले।
ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री इमरान खानको आलोचना गर्दै देशमा ग्यास, पेट्रोल र बिजुलीको मूल्य बढेको भन्दै जनता पहिलेदेखि नै मर्कामा परेको बताएका छन् । त्यतातिर सोच नगरी प्रधानमन्त्रीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा काम गर्ने भिडियो शेयर गरिरहेका छन् । देशका गम्भीर विषयहरूमा किन यस्तो संवेदनशीलता लिइँदैन ?
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले शनिबार ट्वीटरमा ४५ सेकेन्डको भिडियो पोस्ट गरेका छन् । भिडियोमा हिउँ चितुवा गर्जिरहेको देखाइएको छ । ट्वीटरमा भिडियो पोस्ट गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले लेखेका छन्, “यो गिलगिट-बाल्टिस्तानको खाप्लुमा देखिएको लजालु हिउँ चितुवाको दुर्लभ फुटेज हो।”
इमरान खानले भिडियो पोस्ट गरेपछि पाकिस्तानी जनताको रिस उठ्यो र उनीहरूले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई हिंस्रक ट्रोल गरे। पाकिस्तानी जनता भन्छन्, देशमा मूल्यवृद्धिले अवस्था पहिले नै खराब छ, बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ, पैसाको अवमूल्यन भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री पर्यटन प्रवर्द्धनमा व्यस्त छन् ।
एकजनाले प्रश्न उठाउँछन्, के यो भिडियो पाकिस्तानी हो ? “यो इरानको पुरानो भिडियो हो,” उनले लेखे। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले यसलाई पाकिस्तानको भिडियो जस्तो देखाउन खोजिरहेका छन्। अर्काले लेखेका छन्, ‘कोही पनि भोकले मरिरहेको छैन र तपाई पर्यटनमा मोहित हुनुहुन्छ । मानिसहरू दुईवटा रोटीको लागि हल्लिरहेका छन्।”
Previous articleभारतीय दूतावासद्वारा अपांगाता भएकाहरुको अधिकार र सहयोगबारे प्यानल छलफल
Next articleप्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसदमा पेश हुने सुइँको पाएपछि चिनियाँ राजदूत अत्तिईन